समवेदनापत्र | मझेरी डट कम
"किन यस्तो खर्चिलो सुलोचना ? भावनाका कुरा हुन् यसलाई साधारण शब्दमा लेखेर साधारण खाममा हालेर लगेर दिए पनि हुन्न र ?"
"काँ त्यसो भनेर हुन्छ !" अलिक कड्किइन् ।
"सिँगार पटार गरेर अरूकोभन्दा सानदार हुनुपर्छ । उहाँ अरूअरूका समवेदनाहरू एकसे एक आइसके । हामो समूहको पनि नाम राख्नु परेन त अनि ? खाममा हालेर दिने लभ लेटर हो र ? बिथ्थाको मान्छे !!"
यसभन्दा उता केही भन्न उचित ठानेनन् उनका पतिले । भनियो भने फेरि केके उदाहरण र तिता पिरा कुरा हुन सक्लान् भनेर उनी चूप लागे ।
"हस् त, हुन्छ ।" भनेर सुलोचनापतिले समवेदनाको बेहोरा लेख्न बसे । कैले यो मिलेन, कैले यो शब्दभन्दा अर्को हाल्नू र कहिले यो कुरा मिलेन कहिले त्यो कुरा मिलने भनेर सुलोचनाले उनका पतिको बातो बसाइन् । कपीका निकै पन्न सकिए । उनी लेख्ता र मेट्ता हैरान भए दसौम्पटक केरमेट गरेपछि बल्लतल्ल पास भयो । तैपनि सुलोचनाले भनेजस्तो त हुन सकेन । कति हैारनी दिनु भनेर उनले चित्त बुझाइन् ।
यसरी आफ्नी पत्नीबाट समवेदनाको बेहोरा पास गराएर लागे बजारतिर उनका पति। सुलोचना भने सबैकोभन्दा गतिलो समवेदनाको प्रमाणपत्र मृतकको घरमा लाने र सानदारसँग पढेर बुझाउने सपना देख्न थालिन् ।
खेलाचि गरेर सुख ,आफ्नै मार्नु छैन मलाई
प्याला संगै जिउँछु हजूर !!